Taa, anyị na-ekwu maka mgbanwe, ihe ọhụrụ na nkuchi. – Get up to 50% off when you buy multiple small stickers.
Mbụ weere a “na-agafe fad” , mgbe ahụ massively nakweere onye ọ bụla na a smartphone ma ọ bụ a laptọọpụ na dum okwu.
Echetara m Bill Gates na N’ajụjụ ọnụ na David Letterman Show na-eme ihe ọchị n’ihi na ọ na-akọwa ihe ịntanetị bụ na otú ọ ga-esi gbanwee ụwa.
Bill: “[Internet] na-aghọ ebe ndị mmadụ nwere ike ibipụta ozi […], na-eziga ozi ịntanetị …”
Onye na-ajụ ajụjụ: “Ọnwa ole na ole gara aga, e nwere nnukwu ọkwa ọkwa na ịntanetị […] na ha ga-agbasa egwuregwu baseball […] na echere m onwe m “redio ọ na-akụ mgbịrịgba?” “……
Bill: “Ị nwere ike ige ya ntị mgbe ọ bụla ịchọrọ”
Onye na-ajụ ajụjụ: “Ndị na-edekọ teepu hà na-akụ mgbịrịgba???”
… na ihe ndị ọzọ. Ọ na-afụ ụfụ n’ezie ikiri, ma Bill na-achị ọchị. Ọ bụghị na ya, kama na ya.
Ị maara ebe m na-aga na nke a, mana m chọrọ ime ka ọ pụta ìhè.
Eji m obi umeala kwenye na mgbe ọ bụla enwere nnukwu ihe ọhụrụ metụtara, ndị mmadụ na-atụ ụjọ.
Ndị mmadụ ga-anwa ịgbachitere ọnọdụ dị ugbu a n’ihi na “mgbanwe” na-atụ ndị mmadụ egwu. Ịgbanwe ọrụ, na-agbanwe ụlọ, na-agbanwe mmekọ (lol) bụ mmetụta na-atụ egwu n’ihi na a haziri anyị ịchọ nchekwa ma nọrọ na mpaghara nkasi obi anyị.
Ọ bụrụ na ndị nna nna anyị chọtara ọmarịcha ọgba, nke nwere ọtụtụ ihe oriri, ọ dịghị ha mkpa ka ha “si na mpaghara nkasi obi ha pụta” na-alụ ọgụ ụfọdụ ọdụm iji nweta nri ọzọ ha.
Mgbanwe dị egwu na nkà na ụzụ a siri ike nghọta. Ụfọdụ ndị mmadụ na-agbalị ịghọta ya, ma ọ bụ n’eziokwu ike dị ka hell. Anọwo m na oghere a ọtụtụ afọ ma m ka na-amụta ihe ọhụrụ kwa ụbọchị.
Usoro nkwenye ọhụrụ, ụdị blockchain dị iche iche, ndị na-akwado, ndị nnọchiteanya, ndị na-egwuputa ihe, nwere ọnụego, ihe mkpali, okwu ọnụ, wdg.
Nke a bụ ịsị na ọtụtụ ndị ga-ehichapụ ya n’ihi na ha achọghị iji ike ụbụrụ ghọta ya.
Ka m nweta nke a ozugbo: ọ dị mma na ị chọghị ịmụta ya. Amaghị m ka ozi-e si arụ ọrụ ma m na-eji ha eme ihe kwa ụbọchị.
Amaghị m ka ịntanetị na-arụ ọrụ n’ezie ma, ọzọ, m na-eji ya kwa ụbọchị.
Otu na oku ekwentị, ozi ederede, TV, wdg.
Nke ahụ kwuru, ọ na-ewe oge iji teknụzụ ọhụrụ mara ya, ya mere ndị mmadụ ji na-ama jijiji.
Ọtụtụ ndị mmadụ ga-ehichapụ ya n’ihi na ihe ha na-aghọtaghị na-amasị ha, ruo mgbe ha ghọtara na ha nwere ike ịmalite iji nkà na ụzụ na-amaghị nke ọma ihe na-akpata ya.
Ekwenyere m na anyị ka nọ n’isi. Dị ka ọ dị taa, ọ na-esiri ndị na-azụ ahịa ike ịtọ obere akpa, detuo mkpụrụokwu mkpụrụ okwu, tinye aka na usoro ego ego, $ AAVE , Uniswap, Pancakeswap, Curve, wee chọta onye na-eweta ego ziri ezi, wee zipu tokens n’etiti obere akpa wdg.
Dị ka ọ dị ugbu a, ọ bụghị ka ọ ga-amasị ọtụtụ ijeri mmadụ, nke a bụkwa ihe dị mma. Ọ bụ ihe dị mma n’ihi na ozugbo ụlọ ọrụ malitere ilekwasị anya na ndị ahịa centricity na ahụmahụ, onye ọ bụla ga-achọ ịbụ akụkụ nke ya.
A ga-amụ ụlọ ọrụ ọhụrụ na blockchain, a ga-enye ọrụ ọhụrụ. Web3 bụ ihe niile gbasara ịgbanwe ike site na nnukwu ụlọ ọrụ na ndị ọrụ na ọ na-eme n’ihu anyị anya.
$ BTC na $ ETH abụghị ntinye ego afọ 1. Teknụzụ ndị a ga-agbanwe ụwa dị ka anyị si mara ya, ha ga-ahụkwa nguzogide site n’aka otu ndị ahụ na-erite uru kachasị site na ụwa dabere n’inflationary fiat.
Adị m njikere ịzụ ahịa na itinye ego na crypto ahụ e kwuru n’elu maka afọ iri na-abịanụ na ikekwe ọbụna karịa nke ahụ.
Na ihe ndị a niile na-ekwu, ọ bụghị crypto ọ bụla bụ otu, dị ka ọ bụghị ngwaahịa ọ bụla bụ otu.
Iji BTC tụnyere TurtleCoin dị ka iji $ TSLA (Tesla Motors, Inc.) (Tesla Motors, Inc.) tụnyere Theranos. Ma enwere ihe kpatara na Theranos enweghị akara.
Ejiri akwa 3 dabara adaba, okpu papa m, akwa oche, ihe mkpuchi ụmụaka, Igwe Ọdụdọ, Okpu baseball, Pad Mouse, Dog Mat, Pet Bandana, Pet Blanket, Cat Mat, T-Shirt na-arụ ọrụ, Baseball ¾ T-Shirt Sleeve, T-Shirt Omuma , T-uwe elu eserese, Hoodie dị fechaa, Sweatshirt dị fechaa, T-shirt ogologo aka, ogologo uwe elu, T-Shirt adịchaghị, Pullover Hoodie, Pullover Sweatshirt, Nnukwu tankị agba ọsọ, elu enweghị aka, T-shirt dị mkpa, tank Top, Tri T-uwe elu jikọtara ọnụ, uwe elu V-olu, Hoodie zipped, Uwe A-Line, Chiffon Top, T-Shirt dabara adaba, T-uwe dabara adaba, uwe elu V-olu dabara adaba, uwe T-Shirt eserese eserese, leggings , Obere uwe mwụda, T-Shirt adịchaghị scoop, T-shirt dabara adaba, ihe mmado, ihe mmado na-egbuke egbuke, akpụkpọ laptọọpụ, aka uwe laptọọpụ, ihe mmado transperent, akpụkpọ iPad, iPad Snap Case, iPhone Skin, iPhone Snap Case, iPhone Soft Case, iPhone siri ike Akpa, obere akpa iPhone, Samsung Galaxy Skin, Samsung Galaxy Snap Case, Samsung Galaxy Soft Case, Samsung Galaxy siri ike, Mbipụta nka nka, mbipụta nka, Mbipụta Canvas
Tags: AEDAfghan AfghaniAFNahiaAlbanian LekAlgerian DinarALLaltcoinaltcoinsAMDANGAngolan KwanzaAOAArgentine PesoArmenian DramARSAruban FlorinAUDAustralian DollarAWGAzerbaijani ManatAZNBahrain dinarBAMBangladesh TakaBBDBCHBDTBelarusian RubleBelize DollarBGNBHDBhutanese NgultrumBIFBinance USDbitcoinBitcoin CashblockchainBMDBNDBo livian BolivianoBOBBosnia-Herzegovina Convertible MarkBotswanan PulaBrazilian RealBRLBrunei DollarBSDbtcBTNBulgarian LevBurundian FrancBUSDBWPBYNBZDCADCambodian RielCape Verdean EscudoCayman Islands DollarCDFCFA Franc BCEAOCFA Franc BEACCFP FrancCHFChilean Unit of Account (UF)Chinese YuanCircle USD CoinCLFCLPCNYColombian PesoComorian FrancCongo FrancCOPCosta Rican ColónCRCCroatian KunacryptocryptocurrenciescryptocurrencycryptopunksCuban PesoCUPCVECzech KorunaCZKDAIDanish KroneDJFDjiboutian FrancDKKDOGEdogecoinDollar BahamianDollar BarbadianDollar BermudanDollar CanadaDollar JamaicaDollar NamibiaDollar ZimbabweDominican PesoDOPDZDEast Caribbean Dollaregoego cryptoEGPEgypt PoundETBethetherethereumEthiopian BirrEUREurozone EuroFalkland Islands PoundFiji DollarFJDFKPGambian DalasiGbalịaGBPGELGemini US DollarGeorgian LariGhana CediGHSGibraltar PoundGIPGMDGNFGold (troy ounce)GTQGuatemalan QuetzalGuinean FrancGUSDGuyana dollarGYDHaitian GourdeHKDHNLhodlHonduran LempiraHong Kong DollarHRKHTGHUFHungarian ForintIcelandic KrónaIDRILSIndian RupeeIndonesian RupiahINRIQDIranian RialIraqi DinarIRRISKitinye egoJapanese YenJEPJersey PoundJMDJODJordanian DinarJPYKazakhstani TengeKESKGSKHRKMFKPWKRWKuwaiti DinarKwacha ZambiaKWDKYDKyrgystan SomKZTLAKLaotian KipLBPLesotho LotiLiberia DollarLibyan DinarlitecoinLKRLRDLSLltclydMacanese PatacaMacedonian DenarMADMalagasy AriaryMalawian KwachaMalaysian RinggitMaldivian RufiyaaMauritanian OuguiyaMauritian RufiyaaMDLMexican PesoMGAMKDmkpụrụ egoMMKMNTMoldovan LeuMongolian TugrikMOPMoroccan DirhamMozambican MozambicanMRUMURMVRMWKMXNMyanma KyatMYRMZNNepalese RupeenerdNetherlands Antillean GuilderNew Taiwan DollarNew Zealand DollarNGNNgwuputaNicaraguan CórdobaNigerian NairaNIONOKNorth Korean WonNorwegian KroneNPRNZDOmani RialOMRPABPakistan RupeePanamanian BalboaPapua New Guinean KinaParaguay GuaraniPAXPaxos Standard USDPENPeruvian Nuevo SolPeso ChilePeso UruguayanPGKPhilippines PesoPHPPKRPLNPolish ZlotyPound LebanonPound SterlingPYGQARQatari RialrippleRomanian LeuRONRSDRUBRussian RubleRwandan FrancRWFSaint Helena PoundSalvadoran ColónSamoan TalaSão Tomé na Principe Dobrasarsatoshisatoshi nakamotoSaudi RiyalSBDSCRSDGSe rbian dinarSEKSeychellois RupeeSGDshekel IsraelSHIBShiba InuShilling KenyaSHPSierra Leonean LeoneSilver (troy ounce)Singapore DollarSiria PoundSLLSolomon Islands DollarSomali ShillingSOSSouth African RandSouth Korean WonSRDSri Lankan RupeeSTNSudanese PoundSurinamese DollarSVCSwazi LilangeniSwedish KronaSwiss FrancSYPSZLT ManaTajikistani SomoniTanzanian Shillingteslatesla motorsThai BahtTHBTJSTongan Pa?angaTOPtradingTrinidad na Tobago DollarTTDTunisian DinarTurkish LiraTurkmenndistaniTWDTZSUAE DirhamUAHUganda ShillingUGXUkraine HryvniaUS DollarUSDUSDCUYUUzbekistan SomUZSVanuatu VatuVenezuelan Bolívar SoberanoVESVietnamese DongVNDVUVWBTCWrapped BTCWSTXAFXAGXAUXCDXOFXPFxrpYemeni RialYERZARZMWZWL
I kēia lā ke kamaʻilio nei mākou e pili ana i ka loli, ka hana hou a me ka hoʻokomo.
Next Ita nga aldaw pagsasaritaantayo ti panagbalbaliw, panagbalbaliw ken panangampon.
Previous הייַנט מיר זענען גערעדט וועגן טוישן, כידעש און קינדער.